Hordhac: Sheffield United vs Chelsea - Blues Oo Booska 3aad Ku Dagaallamaysa, Shaxda Macquulka Ah Iyo Wararkii U Dambeeyey Labada Kooxoo - Gool24.Net
Hordhac: Sheffield United vs Chelsea – Blues Oo Booska 3aad Ku Dagaallamaysa, Shaxda Macquulka Ah Iyo Wararkii U Dambeeyey Labada Kooxoo
Chelsea waxay safar ku tegaysaa qalcadda adag ee Branmall Lane oo ay foodda isku dari doonaan Sheffield United oo kooxo badan oo waaweyn kasoo yaabsatay qaybtii hore ee xili ciyaareedka, waxaanay Blues wax walba u samayn doontaa sidii ay guul uga keeni lahayd kulankan si ay kaalinta saddexaad ee horyaalka Premier League ugu sii sugnaato.
Kooxda tababare Lampard oo lix ka mid ah toddobadii ciyaarood ee ugu dambeeyey ee Premier League soo guuleysatay, waxay u baahan tahay guul si ay u xaqiijisan karto inay Champions League ka qayb-geli doonto xili ciyaareedka dambe, isla markaana ay uga baxsan lahayd Leicester City iyo Manchester United oo hal dhibic iyo laba dhibcood ka kala dambeeya, kuna kala jira afraad iyo shanaad.
Sidaas oo kale Sheffield United oo aan dhinaceeda dhulka la dhigin saddexdii ciyaarood ee ugu dambeeyey, waxay hal dhibic kaliya ka hooseeyaan Wolverhampton Wanderers oo kaalinta lixaad ku jirta, guul ay ka hesho kulanka Chelsea na waxay kusoo geli kartaa booska lixaad, iyadoo ku xigi doonta Manchester United.
Kooxda tababare Chris Wilder ee Blades waxay garoonkeeda guulo kaga gaadhay Tottenham Hotspur iyo Wolverhampton Wanderers ka hor intii aanay barbarro la gelin Burnley, waxaanay u halgamayaan sidii ay boos ugu yeelan lahaayeen tartanka Europa League ee xili ciyaareekda dambe.
Chelsea oo dhinaceeda guul ay ku dhibaatootay Salaasadii kasoo gaadhay Crystal Palace oo ay 3-2 kaga soo adkaadeen, waxay usoo dallaceen kaalinta saddexaad ee miiska kala-sarraynta, waxaanay ugu mahad-celinayaan goolhaye Kepa oo daqiiqadihii ugu dambeeyey ka badbaadiyey kubbado goolal noqon lahaa.
Lixdii ciyaarood ee ugu dambeeyey, Sheffield United waxay soo badisay laba jeer, laba barbarro ah iyo laba ciyaarood oo laga badiyey, halka Chelsea ay shan guulood iyo ciyaar laga badiyey soo diiwaangashatay.
Ciyaarta: Sheffield United vs Chelsea
Waqtiga: 7:30 pm – Saacadda Geeska Afrika
Garoonka: Branmall Lane
Kaddib dhaawac jilibka ah oo gaadhay Billy Gilmour oo la sheegay inuu muddo afar bilood ah garoomada ka maqnaan doono, Jorginho ayaa rajaynaya inuu kusoo laaban doono safka hore ee Chelsea.
Difaaca reer Spain ee Marcos Alonso ayaa la filayaa inuu kusoo laabto shaxda koowaad kaddib ciyaar uu kaydka ku jira, halka uu Cesar Azpilicueta u dhaqaaqi doono difaaca dhexe.
N’Golo Kante iyo Mateo Kovacic ayaa qaba dhaawacyo muruqa iyo seedaha ah.
Dhinaca Sheffield United, waxa dhaawac kaga maqan Oliver McBurnie oo laga saaray qaybta labaad ee kulankii Wolves, waxaana la filayaa in Lys Mousset uu kusoo bilaaban doono shaxda hore, halka John Lundstram uu khadka dhexe rukun adag ku noqon doono.